'Convénzeme, chirongwa chekunyora chakapihwa naMercedes Milá | Zvazvino Zvinyorwa
Yange iri mumhepo kubva munaNovember uye ichiripo, zvisingawanzo kuitika muchirongwa chine chekuita nemabhuku kuno kuSpain uko kwakanyanya kuwanda 'chokwadi' (kunyangwe zvakanaka, "Peji 2" ichiri kunyorwa mushure memakore, pamwe chimwe chinhu chiri kuchinjira zvirinani munyika medu ... Zvimwe ...)
"Ndinyengetedze" kuratidzwa nemutori wenhau Mercedes Milá, akataura zvinotevera pamusoro peizvi: «Pane nguva, kuverenga bhuku, kuti avo vedu vanoda kuverenga vanofanirwa kumira, vofema uye voti: ndine rombo rakanaka sei kuti munyori aripo! Apa ndipo paunoda kugovana mufaro wako nemumwe munhu, kuvakurudzira, kuvanyengetedza kuti vaverenge. Nguva iyoyo yauya kwandiri. Mushure mekushuvira kuti shefu vangu vaizombondirayira kuti ndiite chirongwa chebhuku paterevhizheni, kurota uku hakuna kuzadzikiswa, zvinoita sekunge kwasvika.
Pamusoro pekuva chirongwa chitsva chebhuku, sekuziva kwangu pane maviri chete parizvino paterevhizheni yedu, ruzivo rwayo nderwe chirongwa chekutanga chakavhurika munyika medu chakagadzirwa ne4G nhare mbozha. Tinogona kuiwana Svondo yega yega pacheni Iva unopenga, iyo inonyanya kuitirwa a mumaguta kuruzhinji, vekutengesa, vasingatyi uye nehunhu hunetsekana.
Munhepfenyuro yega yega ye 'Nditendise', Vaverengi vanotaura naMercedes Milá kuchitoro cheBernat + muBarcelona, ​​vachiedza kumunyengetedza (saka zita rechirongwa) nei munhu achifanira kuverenga mamwe mabhuku, nei mamwe asina kukosha, nei uchiverenga mabhuku mazhinji Classical se yazvino, yemarudzi ese emhando uye nhaurwa, vachiita ongororo yenyaya dzakaburitswa nemabhuku, vachiongorora maratidziro evanyori vavo uye vachifumura mumunhu wekutanga manzwiro avakaverenga.
Pamusoro pekumhanyisa chirongwa ichi, Mercedes Milá anoramba achibhejera zvinyorwa nekutanga mushandirapamwe wakasimudzirwa naiye "Ngatiponese zvitoro zvemabhuku" www.vamusinflass.com. Kwamunoedza kudzivirira, pamusoro pazvo zvese, zvitoro zvemabhuku zvemunharaunda, mazhinji acho aifanira kuvhara madhoo avo nekuda kwekutenga kushoma kwemabhuku agara achiitika munyika ino uye kuwedzera kwemapeji ewebhu akatsaurirwa kutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » 'Convénzeme', chirongwa chekunyora chakapihwa naMercedes Milá